Kullamadii la ciyaaray shalay illaa xalay iyo rikoorradii xiisaha badnaa ee laga diiwaan geliyay! | Bakool.net
Home / CAYAARAHA / Kullamadii la ciyaaray shalay illaa xalay iyo rikoorradii xiisaha badnaa ee laga diiwaan geliyay!
Kullamadii la ciyaaray shalay illaa xalay iyo rikoorradii xiisaha badnaa ee laga diiwaan geliyay!
Fulham 0-5 Arsenal
Alexandre Lacazette waxa uu si toos ah uga qayb qaatay shan gool, shan jeer oo xillo ciyaareerdkan Premier League kusoo billawday (saddex gool, laba caawin).
Aaron Ramsey waxa uu gool dhaliyay isagoo 39 il biriqsi garoonka ku jira, waana goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa ee ciyaaryahan Arsenal beddel ugu soo galo ka dhaliyay Premier League.
Ramsey iyo Aubameyang iyagoo beddel kusoo galay ayay goolal kala dhaliyeen goolalna caawiyeen. Tani waa markii ugu horreysay taariikhda Premier League ay laba ciyaaryahan oo beddel kusoo galay ay goolal kala dhaliyaan sidoo kalena kuwo kale ka kala caawiyaan hal ciyaar gudaheed.
Eden Hazard ayaa ka qayb qaatay 11 gool dhammaan tartaamda 11 ciyaarood ugu dambeysay Chelsea u ciyaaro (sagaal gool, laba caawin)
Rose Barkely waxa uu noqday ciyaaryahankio ugu horreeyay ee Ingiriis ah kaasoo goolna u dhaliyo Chelsea isla markaasna mid kale caawiyo, tan iyo Frank Lampard 2013.
Goolkii uu dhaliyay Alvaro Morata waxaa lagu soo dhisay 31 baas, waana goolka basaaska ugu badan lagu dhaliyay xilli ciyaareedkan Premier League
Isku darka labada koox qaybtii hore ee ciyaarta waxa ay sameeyeen keliya Saddex darbo, waana ciyaartii ugu darbooyinka yareyd qaybta hore ee ciyaarta xilli ciyaareedkan Premier League walow ay la simanyihiin Newcastle vs Arsenal iyo Huddersfield vs Cardiff.
Ciyaartoyda tuurtay 10 rigoore ugu yaraan, keliya Paplo Angel (50% 5/10) ayaa ka liita Riyad Maher (58% 7/12).
Waa markii labaad taariikhda Premier League ay saddex koox oo kala duwan weli guuldarro la’aan ahaadaan Siddeed kullan oo la ciyaaray iyadoo Chelsea, Liverpool iyo Man City aan dhinacooda dhulka la dhigin, waxaa keliya sidan ay horay u dhacday xilli ciyaareedkii 2011/12.
Dhammaan saddexda gool ee Gonzalo Higuain uu ku dhaliyay San Siro waxaa ka caawiyay Suso.
Gaicomo Bonaventura ayaa shalay saftay kullankiisii 150-aad ee Milan, waxaana xusid mudan inuu gool dhaliyay.
Mauro Icardi ayaa xalay gaaray 103 gool oo Serie A ah, isagoo soo qabtay Christian Vieri oo ku jiray kaalinta 7-aad ciyaarta Inter Milan goolasha badan ugu dhalisay Serie A.
Lionel Messi ayaa diillinta bannaankeeda ka dhaliyay 57 gool, 10-kii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay, waana in ka badan ciyaaryahan walbo oo ka ciyaara shanta horyaal ee ugu waaweyn qaaradda Europe.
Luis Suarez oo 27 ka caawiyay Messi ayaa ka tallaabsaday Dani Alves oo ahaa xiddigga goolasha ugu badan ee La Liga ka caawiyay Captain-ka Barcelona waxaana Alves diiwaanka ugu jirtay 26 gool oo uu Messi ka caawiyay.
Arthur Melo ayaa sameeyay 142 baas oo 135 ka mid ah saxay, waana ciyaaryahankii ugu horreeyay La Liga sidaas ka sameeyo isagoo bannaanka kusoo ciyaarayo tan iyo Xavi Hernandez oo November 2012 marti u ahaa Levante, sidoo kale waxa uu noqday ciyaaryahanka ugu baasaska badan La Liga hal kullan xilli ciyaareedkan.
Previous: Maxkamadda Ciidamada Qalabka sidda oo Xukuntay Askari dhac geystay
Next: Arsenal oo heshiis la gaartay shirkada qalabka Sportiga ee Adidas